ငါတို့ဟာ ကမ္ဘာအိမ်ထောင်စုကြီးမှ ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ညီကိုအရင်းတွေပါ။ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ငါတို့ဟာ ကမ္ဘာအိမ်ထောင်စုကြီးမှ ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ညီကိုအရင်းတွေပါ။
လူသားတိုင်းဟာအမှန်တရားကိုမျတ်နိုးကြတယ် ချစ်ခင်ကြတယ်၊ ယုံကြည်အားကိုးကြတယ်၊ ဒါအမှန်တရားမို့လို့ပါ။ သို့ဗေမယ့်လည်း အဲဒီအမှန်တရားကိုပဲ မုန်းတီးနေတဲ့သူတွေ၊ ရန်လိုနေတဲ့သူတွေ၊ မိမိအတ္တကိုရှေ့တန်းတင်ပြီး ဘယ်သူ့မျက်နှာကိုမှမထောက်ပဲ အရွဲ့တိုက်လုပ်ချင်ရာလုပ်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့ ငါကိုစိတ်မဆိုကြပါနဲ့ ငါဟာမင်းတို့ရဲ့ရန်သူမဟုတ် မင်းတို့ကြေနပ်ရင် ငါဟာမင်းတို့အတွက် အခင်မင်ဆုံးမိတ်ဆွေတစ်ဦးပါ။ သူငယ်ချင်းတို့ လူတိုင်းဟာတစ်မျိုးစီကို ပိုင်ဆိုင်ချင်ကြတယ်၊ အဲဒီတစ်မျိုးစီအတွက် ဘယ်သူကမှဖြည့်စီးမပေးနိုင်ကြဘူးသို့ဗေမယ့်လည်း လေားကမှာ အရာအားလုံးအတွက် အဆင်အပြေဆုံးဆိုတာရှိတယ်။
အဲဒါက မင်းရဲ့လက်ခံပေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်။ လူတိုင်းမှာတော့ မရှိနိုင်ဗေမယ့်သူငယ်မင်းမှာရှိတယ် အမှန်တရားကိုမြတ်နိုးတဲ့သူတိုင်းဟာ ဘယ်တော့မှ ဟန်မဆောင်တက် ဖူး။လက်ရှိငါတို့ဖြစ်နေတဲ့ပြသနာတွေကို သူငယ်ချင်းကိုတိုင် စဉ်းစားကြည့်ပါလား၊ အဲဒီလိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ သူငယ်ချင်းဘက်ကတစ်လှည့် စဉ်းစားပြီးရင် တို့ဘက်ကလည်းတစ်လှည့်စဉ်းစားပေပါ။ ရှုပ်ထွေးလွန်းတဲ့ ပြသနာတွေက သူငယ်ချင်းရဲ့သေသေချာချာစဉ်းစားကြည့်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်အပေါ်မူတည်ပြီး၊ တစ်ခုခုတော့ အဖြေထွက်လာမှာပါ။ လူတိုင်းဟာ ကိုချင်းစာစိတ်ဆိုရှိတယ်သူငယ်ချင်း အဲဒီလိုမင်းစဉ်းစားပြီးတဲ့အခါမှာ မင်းရဲ့ကိုယ်ချင်းစာစိတ် ဘယ်လောက် ရှိလဲး ဆိုတာပါ မင်းတိုင်းတာလို့ရလာလိမ့်မယ်သူငယ်ချင်း။ အမှန်တရားဆိုတာ အမှန်တကယ်တော့ ကိုချင်းစာနာတက် တဲ့စိတ်ပါသူငယ်ချင်း။ဘယ်သူကမှားတယ် ဘယ်သူကမှန်တယ်ဆိုတာထက် သူငယ်ချင်းရဲ့ကိုချင်းစာစိတ်က အဓိကကျ ပါတယ်။ယနေ့ ဖြစ်နေတဲ့ပြသနာတွေကိုပြန်ကြည့်ပါသူငယ်ချင်းရာ မင်းနဲ့ငါနဲ့အခုလိုတစ်ဦးကိုတစ်ဦးနားလည်ပြီး အပြန်အ လှန်ကိုယ်ချင်းစာနာတက်ရင် ငါတို့တိုင်းပြည်မှာ ပြသနာဆိုတာဘယ်ရှိပါတော့မလဲ။တကယ်ပါသူငယ်ချင်း အခုတို့တိုင်း ပြည်မှာ ရန်ဖြစ်နေကြတဲ့သူတွေဟာ အမှန်တရားအတွက်လည်းမဟုတ်၊ သစ္စာတရားအတွက်လည်းမဟုတ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက်လည်းမဟုတ်၊ဘာသာ သာသနာအတွက်လည်းမဟုတ်ဘဲ မိမိအတွက် မိမိရဲ့အတ္တအတွက် မိမိရဲ့မာနအတွက် မိမိကိုယ်တိုင်းဖြစ်ချင်ရာကိုဖြစ်အောင်လိုက်လုပ်နေကြတာလေ အဲဒါကိုအတ္တလို့မခေါ်ရင်ဘာခေါ်မှာလဲ၊ သူငယ်ချင်းတို့ တွေဟာဒီလူတွေကို ပြုပြင်ပေးဖို့အချိန်တန်ပြီသူငယ်ချင်း၊ ဒါကလည်းဒီလူတွေမှာအပြစ်မရှိဘူးလေ မိမိရဲ့စိတ်သဘေားထား အရဖြစ်လာတာ ဘာတက်နိုင်မှာလဲး။ အဓိကတော ပညာရေးနိုမ့်ပါလွန်းရင်လည်း ဒီလိုပြသနာက ဖြစ်တက်တယ်။ ဟိုးအာရဗ်နိုင်ငံမှာ အစ္စလာမ့်အလင်းရောင်းမရခင်တုန်ကပေါ့ ပညာမဲ့တွေအလွန်ပေါးသတဲ့ အဲဒီမှာက လူတွေဟာ ဘယ် လောက်အထိပညာမဲ့သလဲးဆိုရင် သူ့ကုလားအုပ်က ရေအရင်သောက်လို့ဆိုပြီး၊ ငါ့ကုလားအုပ်ကဘာကြောင့်ရေ နောက်မှ သောက်ရတာလဲဆိုတဲ့အချက်အပေါ် အရေးတယူလုပ်ပြီး ပြသနာတက်လိုက်ကြတာ ဘာပြေားကောင်းမလဲ သူဖက်အုပ်စုနဲ့ ကိုယ့်ဖက်အုပ်စု ချလိုက်သတ်လိုက်နဲ့လူတွေလည်းတော်တော်များများသေပြီတော့မှ တဖက်နဲ့တဖက် အပြန်အလှန် ကြိမ်းကြမောင်းကြနဲ့ နောက်လာနောက်သားပါမကျံ အငြိုးအတေးတွေနဲ့ သားစဉ်မြေးဆက် သတ်ပွဲကြီးတွေ ဆင်နွဲးလိုက်ကြ တာတကယ်ပါသူငယ်ချင်း မင်းလည်းပညာရှိ စဉ်းစားတွေခေါ်နိုင်မှာပါ။ တကယ်ဆိုရင် မည်သည့်အတွက်ကြောင့်မှ ပြသနာ မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ငါထင်တယ်။ ငါ့အတွေးအခေါ်က လူမှန်ရင်ပြသနာနဲ့ ပြသနာကိုမဖြေရှင်းဘူး၊ ရန်ကိုရန်နဲ့လည်းမတုန်ပြန်ဘူ ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ သိုသိုသိမ့်သိမ့်လေး ဖြေရှင်းမှ ပြသနာရဲ့လှောင်မြိုက့်မီးက အေးငြိမ်းမှာပေါ့သူငယ်ချင်းရ။ဟုတ်ပြီ သူငယ်ချင်းအဲဒီထက်ပိုပြီးသင့်တော်တဲ့ဟာလည်းရှိသေတယ် အဲဒါကတော့ သူများကိုဂရုမဆိုက်ချင်ရင်တောင် ကိုယ့်ကို ကိုယ်ဂရုဆိုက်သင့်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်အခုဘာလုပ်နေလဲဆိုတာ သိရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆင်ချင်တက်လာမယ်။ အဲဒါက အကောင်းဆုံးသော နည်းလမ်းပဲ။ လူတိုင်းဟာ ဒီအချက်ကိုသဘေားမပေါက်လို့ဖြစ်နေတာ၊ အခုလက်ရှိငါဟာ ဘာလုပ်နေလဲ၊ ဘယ်လိုလဲး၊ ဘာဖြစ်နေတာလဲ ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်စမ်းစစ်ကြည့်ပါသူငယ်ချင်း၊ မိမိဟာ စမ်းစစ်ချင်းကို လည်းပြုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်းကလည်း မိမိအတွက် အနီးဆုံးမှာရှိလာမယ်။ သူငယ်ချင်းရေ ငါဒီစကားတွေကို ပြေားတယ်ဆိုတာက ငါကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ချင်လို့ပါ၊ ဒီစကားတွေထဲးမှာ အမှားအယွင်းတစ်ခုခုပါခဲ့မယ်ဆိုရင် ငါကိုယ်တိုင် ပြုပြင်ဖို့ခံယူပြီးသားပါ၊ တကယ်လို့သူငယ်ချင်းဘက်ကမှားနေတယ်ဆိုရင်တော့ သူငယ်ချင်းမင်းကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ပါ၊ မင်းရဲ့ပြုပြင်မှုအတွက် ဘယ်အရာမဆို မင်းဂရုမဆိုက်နဲ့ စကားလုံးတိုင်းဟာတန်ဖိုးရှိတယ် ကိုယ့်ဘက်က ဘယ်လောက်နဲ့တန်းဖိုးဖြတ်မလဲဆိုတာ ကိုယ့်ဟာကိုဆုံးဖြတ်ပါသူငယ်ချင်း။
This entry was posted on March 8, 2013, in ဆောင်းပါး, နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← အမေရိကန်၏ ရွှေ့ လျားနေသော စစ်တပ် သို့မဟုတ် USS Ronald Reagan	အစ္စရေးအား နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ် ခုံရုံးသို့မတင်ရန် ကနေဒါမှ ပါလက်စတိုင်းကို သတိပေး →